डिसेम्बर 20, 2018 साइन्स इन्फोटेक	9 Comments डा. राम बहादुर बोहरा, देश, नेपाल
मेरो देश नेपालले कहिले काचुली फेर्ला ? मलाई लाग्छ यहाँ कानुन हरेकको जेबमा देखिन्छ । कानुनलाई राजनीतिबाट पृथक राखेमा मात्र कानुनले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछ । भ्रष्टाचार हुनुमा कानुन कमजोर हुनुलाई मान्न सकिन्छ । आज तल्लो तहदेखि माथिसम्म भ्रष्टाचार मौलाएको छ । जसले जे गरेपनि हुन्छ भन्ने कुरा हाल नेपालमा देखिन थालेको छ ।
फेसबुकमा गाई खानेलाई सम्मान भन्ने खबरले यो कुरा सावित गरेको छ । नेपाली युवालाई नेपालमै काम गर्ने वातावरण मिलाउन सके हार्ट अटेक र आत्माहत्या गर्नेको संख्या घट्ने देखिन्छ । नेपालका धरासायी भएका उधोगलाई प्रोत्साहन दिन सके देशमा आमुल परिवर्तन निश्चित देखिन्छ ।
राष्ट्रको समृद्धि उद्योगमा पैसा लगाएर गर्न सके घट्ने होइन बढ्न सक्नेछ । आज नेपाल ९०% सामान छिमेकीको खान बाध्य भएका छन् । के हुदैन नेपालमा तर पनि हामी परनिर्भरमा बाच्ने गरेका छौं । नेपालमा उत्पादन हुन्छ कोही खान चाहदैन । सस्तो खाने बानी परेका नेपाली हामीले जुन चिज हामीले खाएका छौं के स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले जायज छ ?
← गलत कार्यमा लागेको श्रीमानलाई ठिक पार्ने डा. राम बहादुर बोहराको सुझाव
सत्य सावित हुँदैछन् भगवान कृष्णले गीतामा गरेका भविष्यवाणीहरु →
मिर्गौला रोग र मानव स्वास्थ्य
फ्रेवुअरी 17, 2019 फ्रेवुअरी 17, 2019 साइन्स इन्फोटेक 0
सेप्टेम्बर 14, 2018 अक्टोबर 15, 2019 साइन्स इन्फोटेक
9 thoughts on “मेरो देश नेपालले कहिले काचुली फेर्ला ?”
Pingback:मानिसले गरेको सानो गल्तीले निम्त्याउछ ठुलो दुर्घटना
Pingback:के यहि हो परिवर्तन ?
Pingback:समयलाई चिन नसक्नु दुर्भाग्य
Pingback:धर्म संस्कृति होइन विकासको बाधक, धर्म संस्कृति नभए हुन्छ देश कंगाल